Dowladda oo sheegtay inay soo gaba-gabeeysay qorshe ku saabsan maamul goboleedyada – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda oo sheegtay inay soo gaba-gabeeysay qorshe ku saabsan maamul goboleedyada
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay haatan soo gaba-gabeeysay qorshe cusub oo maamul goboleedyada dalka, kahor-istaagaya inay heshiis si iskood ah ula galaan hay’ado caalami ah.
Wasiirka qorsheynta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in maamul goboleedyada dalka aanay wax heshiis ah si toos ah ula geli karin shirkado iyo hay’ado caalami ah, iyagoo aan fasax ka haysan dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Sidoo kale, wasiirka ayaa sheegay in wasaaradiisa ay haatan diyaarisay qorshe ay dowladda Soomaaliya kula wareegayso deeqihii Midowga Yurub ugu tala-gashay dalka Soomaaliya, si ay dib ugu qeybiso maamul goboleedyada dalka.
Dowladda federaalka Soomaaliya iyo Midowga Yurub ayaa maalintii shalay kala saxiixday heshiis ku saabsan in deeq gaareysa 49 milyan oo Euro ah oo horumarinta waxbarashada Soomaaliya loogu tallo-galay si toos ah loogu wareejiyo dowladda Soomaaliya.
Illaa iyo haatan lama oga sida ay maamul goboleedyadda dalka u fullin doonaan amarkaan kasoo baxay dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoo la ogsoon yahay in maamuladaasi qaarkood ay iskood heshiisyo goonni ah ula galeen dowlado shisheeye iyo shirkado caalami ah.